सीमानाका - कान्तिपुर समाचार
अझै खुलेनन् नाका
सरकारले बिहीबार भारत र चीन सीमाका थप १६ वटा नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि शुक्रबार सबै नाकामा सर्वसाधारणले सहज आउजाउ गर्न पाएनन् । केही ठाउँमा गृह मन्त्रालयबाट जानकारी नआएको र केहीमा तयार...
सीमा क्षेत्रका ३० नाका खुला
नेपाल-भारत सीमामा आवतजावत गर्नेको अभिलेख राखिने
विज्ञ समूहले सीमासम्बन्धी के-के प्रमाण जुटाइरहेको छ ?
राष्ट्रपतिद्वारा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण
असार ४, २०७७
लोपोन्मुख जातिलाई छैन ‘लकडाउन राहत’
जेष्ठ ३०, २०७७
कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको बेला धेरैतिर सरकारी राहत वितरण भएका छन् । तर, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख समूहका आदिवासी जनजाति राहत पाउनबाट वञ्चित गरिएका छन् । सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएको कारण दिँदै उनीहरूलाई राहत दिन अस्वीकार गरिएको हो ।
प्रदेश ५ ले तयार पाऱ्यो आइसोलेसन मापदण्ड
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्लास्तरीय, स्थानीय तथा होम आइसोलेसन गरी ३ तहका आइसोलेसनका लागि फरक–फरक मापदण्ड तयार पारेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
जहाँ राज्यको उपस्थिति शून्यजस्तै छ
सात धुर जमिनमा एक–एक कोठाका तीन घर छन्, घरको पिँढीमा चुलो । तीनवटै चुलोको उस्तै विशेषता छ, ती अचेल आक्कलझुक्कल मात्रै बल्छन् । मजदुरी गरेर चलाउनुपर्ने दैनिकी काम गर्ने ठाउँ नभएपछि पट्यारलाग्दो बन्दै छ । पेट झन्झन् दाबिएर भित्र छिरिरहेछ । यही कारण, हसिना खातुनको पेट खानाले उकासिनुको साटो पेटिकोटको इँजारले चरप्पै कसिन्छ । उनले कान्तिपुरसँग संवाद गर्न बस्नुअघि पनि त्यसैगरी पेट कसेकी थिइन् ।
प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने उमेर समूहकै धेरै संक्रमित
जेष्ठ २९, २०७७
कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको उमेर समूहमा थोरै देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले समुदायमा संक्रमण नदेखिएकाले जोखिममा रहेको समूह जोगिएको बताए । उक्त समूहमा संक्रमणको व्यापक विस्तार भए मृत्युदर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
लकडाउन खुकुलो : के-के खुल्छ, के-के खुल्दैन ?
सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय तथा काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणालीबाट निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार राति सम्पन्न बैठकले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल व्यापार, व्यवसाय र आवागमनमा केही खुुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो । यसबारे बिहीबार आधिकारिक सूचना जारी हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
खोइ खर्चको हिसाब-किताब ?
लकडाउन सुरु भएको साढे दुई महिना बित्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । औसतमा हिसाब गर्दा दिनमा १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो विपत्ति र संकटका बेला सबै खर्च विवरण पारदर्शी गर्नुपर्ने सरकार र मन्त्रालयहरु सूचना लुकाएर बसेका छन् ।
‘खाना खानसमेत खर्च नभएपछि ज्यालाको आश मारेरै आयौं ’
जेष्ठ २७, २०७७
६० वर्षीय वीरबहादुर राना हरेक वर्ष मंसिरमा भारत जान्थे, चैतमा घर फर्किन्थे । भारत उत्तराखण्डको बद्रीनाथ नजिकै जोशीगढमा काम गर्ने उनी यस वर्ष पनि चैत सुरुमै घर फर्किन चाहन्थे ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने
पालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटेर जारी भएको अध्यावधिक नक्सालाई नेपालको निसान छाप (संविधानको अनुसूची ३) मा राख्नका लागि सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको हो ।
‘क्वारेन्टाइनबारे सीडीओले केन्द्रमा सही रिपोर्टिङ गर्दैनन्’
बिनु सुवेदीअजित तिवारी
ठूलो आपत्‌विपत् पर्दा होस् वा सामान्य समस्या, आमनागरिकले सरकारी संयन्त्रसँग सहयोगको अपेक्षा गर्छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना पीडा सुनिदिऊन् भन्ने चाहन्छन् तर त्यसअनुसार काम हुँदैन । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका क्रममा पनि यस्तै भइरहेको छ ।
दिनभरि क्वारेन्टाइन, रात परेपछि घर
बिनु सुवेदीसन्तोष सिंहसुनिता बराल
३४ वर्षीय शेष अन्जारे क्वारेन्टाइनका नाइके हुन् । भारतको गुजरात अहमदावादबाट १४ दिनअघि घर फर्केर क्वारेन्टाइन छिरेका अन्जारे समूहमा चल्तापुर्जा भएकाले उनलाई टोलीको नाइके तोकियो । सरकारको मापदण्डअनुसार उच्च सुरक्षा सतर्कतासहित क्वारेन्टाइन सञ्चालन हुनुपर्ने हो तर पुरानो विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन रेखदेख गर्ने कोही सरकारी अधिकारी नभएपछि उनी आफैं अघि सरे र क्वारेन्टाइनको नाइके भए ।
भारतबाट फर्किए साढे ७ लाख
कोभिड–१९ महामारी फैलिन थालेपछि भारतबाट हालसम्म साढे ७ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । २०७६ फागुन २५ यता ७ लाख ५३ हजार २ सय १९ जना फर्किएका हुन् । चैत ११ मा नेपालमा लकडाउन घोषणा भएसँगै स्वदेश फर्किनेको संख्या २ लाख ४३ हजार ८ सय ३१ पुगेको छ ।
७२ संक्रमित एउटै स्कुलमा
जेष्ठ २६, २०७७
यशोधरा गाउँपालिका–५ का दुर्गेशकुमार धोबी स्टिलको भाँडामा तातो पानी बोकेर हतारिँदै घर छेउको अनिरुद्र पब्लिक मावि बैदौलीमा आइपुगे । स्कुलको मूल गेटबाट मुखमा कपडाको हरियो मास्क लगाएका उनका भिनाजु बाहिर निस्किए ।
दिनभरि दशगजामा बसेर फेरि भारततिरै
जेष्ठ २५, २०७७
जमुनीघाटको आँपगाछीमुनि डेढ घण्टाजति सुस्ताएपछि धनुषाधाम काशीपुरका १८ वर्षीय विष्णुदेवकुमार यादवको थकान केही मेटियो । सुत्नुअघि उनले त्यहीं बसेर एउटा कुरकुरे र एक बोत्तल पानी खाएका थिए ।
‘विदेशबाट कामदारको उद्धारमा रोजगारदातालाई नै जिम्मेवार बनाऔँ’
जेष्ठ २४, २०७७
पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली कामदारको सुरक्षा र सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको लागि रोजगारदाता र गन्तव्य देशलाई नै जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संयन्त्रै संयन्त्रले सकस
कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लकडाउनको स्वरूप नबदलिए सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने भन्दै राजधानीका व्यवसायीहरुले बुधबार सरकारलाई चेतावनी दिए । त्यसको भोलिपल्टै न्युरोड, चाबहिल, बानेश्वर तथा आसपासमा चहलपहल बढ्नुका साथै पसलहरु खुल्न थाले ।
क्वारेन्टाइनबाट परीक्षणबिनै घर पठाउने ?
क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ नयाँ राष्ट्रिय परीक्षण गाइडलाइनअनुसार यस्तो नीति लिएको हो । नयाँ गाइडलाइनअनुसार लक्षण देखिएका संक्रमितलाई १४ दिनसम्म राख्ने र थप ३ दिनमा कुनै समस्या नआए घर पठाइने भएको छ ।
१६८ जना नेपाली यात्रु लिएर युएईबाट एयर अरेबिया काठमाडौं उड्यो
होम कार्कीसुरज कुँवर
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट १६८ जना नेपाली यात्रु लिएर एयर अरेबिया काठमाडौंका लागि उडेको छ । एयर अरेबियाको उडान नम्बर जी ९: १७५१ नम्बरको विमान स्थानीय समयअनुसार १२ : ०३ मा उडेको हो । जहाजमा एक नेपालीको शव पनि छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालयबाट गत जेठ ९ मा आफूलाई कोभिड–१९ संक्रमणको खबर आउँदा तौलिहवाका एक सञ्चारकर्मी आफ्नो कार्यालयमै थिए । ‘खबर परिवारलाई बताउन चाहन्थें,’ उनले भने, ‘अरूलाई पनि सर्‍यो कि भन्ने मनमा चिन्ता थियो ।’